merolagani - सात जीवन बीमा कम्पनीको बोनस दर सार्वजनिक,कति कति दिए बोनस ?
सात जीवन बीमा कम्पनीको बोनस दर सार्वजनिक,कति कति दिए बोनस ?
Nov 22, 2020 02:51 PM Merolagani
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १९ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सात वटाले बोनस दर सार्वजनिक गरेका छन् । कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बोनस दर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
हालसम्म ज्योति लाइफ,महालक्ष्मी लाइफ,प्रभु लाइफ,सिटिजन लाइफ, एलआईसी नेपाल,नेशनल लाइफ र रिलायन्स लाइफले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि बोनस दर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बीमा समितिबाट स्वीकृति प्राप्त भए पछि कम्पनीहरूले संचालनमा ल्याएको तथा मुनाफामा सरिक हुने बीमालेखहरूको बीमाङ्कमा प्रति हजारका दरले बोनस घोषणा गरिन्छ ।
एलआईसी नेपाल ८८ रूपैयाँ सम्म बोनस दर दिने
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बीमा योजना अनुसार ६६ देखि ८८ रूपैयाँ सम्म बोनस दर दिने भएको छ ।
उक्त बोनस दर कम्पनीले भुक्तानी गर्ने बीमालेख अनुसारको दाबीहरुमा तथा चालु बीमालेखहरुमा लागु हुनेछ । साथै, अर्को बीमाङ्कीय प्रतिवेदन अनुसार बीमा समितिबाट अर्कोे व्यवस्था नभएसम्म सोही अनुसारको बोनस दर कायम गरिने पनि इन्स्योरेन्सले जनाएको छ ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बोनस दर सार्वजनिक गरेको छ । इन्स्योरेन्सले प्रति हजार बीमाङ्कमा २५ रुपैयाँदेखि ७७ रुपैयाँसम्मको बोनस दर सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त दर मृत्यु दाबी, पूर्ण वा आंशिक अवधि भुक्तानी दाबी, समर्पण मूल्य दाबी, चुक्ता मूल्य तथा चालु बीमालेखमा समेत लागु हुनुका साथै अर्को बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम बीमा समितिबाट अर्को व्यवस्था गर्न स्वीकृत नभएसम्म भुक्तानी हुने सम्पूर्ण दाबीहरुमा समेत सो बोनस दर कायम हुने इन्स्योरेन्सले जनाएको छ ।
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बीमांकिय मुल्यांकन प्रतिबेदन बीमा समितिबाट गत जेठ ८ गते स्वीकृति भएपछि बोनस दर सार्वजनिक गरेको छ । इन्स्योरेन्सले २० रुपैयाँ देखि ७० रुपैयाँसम्म बोनस दर सार्वजनिक गरेकाे हाे ।
बीमा समितिले हालै जारी गरेको संसोधित बीमाङ्किय मुल्याङ्कन निर्देशिकामा सो अवधि सम्म जारी पोलिसीको विमाङ्कीय मुल्याङ्कन गर्दा जारी पोलिसीको अवधि भुक्तानी नभए सम्मको लागि बोनस व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नयाँ कम्पनीहरुमा पहिलो पल्ट उक्त व्यवस्था सहितको मुल्याङ्कन गरी बोनस घोषणा गरेको हो ।
बीमा कम्पनीहरुले हरेक वर्ष बीमित ग्राहकलाई दिने बोनस दरको घोषणा गर्ने गर्छन् । बोनस दर बीमा कम्पनीहरुले आफुले आर्जन गरेको कुल बीमांकको रकममा निर्भर रहने गर्छ । बोनस वितरण गर्दा मृत्यु दर,बीमा कम्पनीको खर्च र भविष्यमा तिर्नु पर्ने ब्याज जस्ता सम्पूर्ण रकमहरु कटाएर वितरण गर्ने गरिन्छ । कम्पनीले प्राप्त गर्ने सबै पुँजी स्रोतमा तिर्नु पर्ने सम्पूर्ण दायित्व घटाएर उब्रने रकम (सरप्लस) लाई नै बोनसको रुपमा वितरण गरिन्छ ।
गत वर्ष मात्रै समस्याग्रस्त संस्थाबाट फूकुवा भएको समृद्धि फाईनान्स(SFCL)ले चालु आर्थिक वर्षको दाेस्राे त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दास्रो त्रैमासमा फाईनान्सको नाफा ऋणात्मकबाट धनात्मक तर्फ रुपान्तरण भएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
२५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालन गर्ने
Jan 27, 2021 01:57 PM
कुनै समयकाे 'नम्बर वान' बैंक किन खस्कने क्रममा,जुनियर बैंकले छलाङ मार्दा उसकाे ग्राफ किन ओरालाे ?
Jan 27, 2021 01:03 PM
एनएमबि लघुवित्तको नाफा ५७ प्रतिशतले बढ्यो, इपिएस भने घट्यो
Jan 27, 2021 12:48 PM
आरम्भ चौतारी लघुवित्तको व्यवसाय विस्तारसँगै खुद नाफामा देखियो आकर्षक प्रगति, खराब कर्जा भने बढ्दै
Jan 27, 2021 12:37 PM
मञ्जुश्री फाईनान्सको नाफामा गिरावट, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
Jan 27, 2021 12:29 PM